Frantsa: manohitra tanteraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika | NewsMada
Frantsa: manohitra tanteraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika
Nanomboka ny tapaky ny volana novambra ka hatramin’izao ny hetsika ataon’ireo « Gilets jaunes » any Frantsa. Tsy eken’ny maro anisa intsony ny fiakaran’ny vidin-tsolika. Tao anatin’ny herintaona monja : ny lasantsy niakatra 15 % ; ny gazoala nanatombo 23 %. Mirotsaka any amin’ny kitapom-bolam-panjakana avokoa ny 2/3 avy amin’ireo vidin-tsolika ireo. Nanambara ny fitondrana frantsay fa ny vidin’io akora io eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny mahatonga izany, mety mbola hitohy hatramin’ny taona 2022.
Toherin’ny maro anisa izany vidin-tsolika izany, ary vao mainka mihahenjana ny hetsika, miteraka fikorontanana manerana ny tanàna maro, indrindra raha ny hita tao Paris, ny faran’ny herinandro teo. 84 % amin’ny vahoaka frantsay manamarina ny ataon’ny « Gilets jaunes », araka ny navoakan’ny gazety Le Figaro.
Mampitombo ny hatezeran’ny mponina ny valintenin’ny ny filoha frantsay, Emmanuel Macron. Tsy resy lahatra tamin’ny fanazavana nomen’ny filohany ny vahoaka frantsay. Nanambara ireo mpitarika ny hetsika fa samy hafa tanteraka ny fitakian’izy ireo sy ny ataon’ireo mpanararaotra mandroba, mangalatra sy mandoro. Tranombarotra maro voaroba na tsy afa-nisokatra, fifamoivoizana tapaka. Mbola tsy voavaha izany ity olana goavana ity hatramin’izao.
Firenena iray iharan’izay sondro-bidin’ny solika matetika izay i Madagasikara, nefa mbola tsy hita aloha izao ny loko manohitra izany fa ny loko manohana kandida amin’ny filoham-pirenena no betsaka.